Ra’iisul Wasaare Saacid oo sheegay in Garooska uu ka madax banaan yahay hey’adaha dowladda – idalenews.com
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid ayaa sheegay in Hey’adaha garsoorka ay ka madax banaan yihiin hey’adaha kale ee dowladda, isagoo difaacay xukunada ay ridaan Maxkamadaha dowladda.
War saxaafadeed afka Ingiriiska ku qornaa oo ka soo baxay Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo jawaab u ahaa hadalada ka soo baxayay Beesha caalamka oo ku saabsanaa xariga wariyaha iyo haweeneydii sheegtay in lka kufsaday ayaa waxaa uu sheegay in Maxkamadaha ay u madax banaan yihiin xukunada ay ridaan.
“Soomaaliya waxay leedahay Garsoor madax banaan, go’aanka maxkamada ay qaadatay waa mid u gaar ah, Xukuumada dib u eegis ayay ku sameyn doonaan go’aanka maxkamada riday”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Saacid.
Ra’iisul Wasaare Saacid ayaa mar kale ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay ilaalineyso xuquuqda aadanaha, isagoo xusay inay sameeyeen gudi madax banaan oo baaritaan ku sameeya tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadana ee ka dhacay dalka 12-kii bilood ee u dambeeyay.
Qaramada Midoobey iyo Beesha caalamka ayaa sheegay inay aad uga xumaadeen xukunkii lagu riday Wariye C/casiis Koronto iyo Haweeneydii la kufsaday, kaasoo Maxkamada Gobolka Banaadir ay ku xukuntay min hal sano oo xarig ah.